Xitaa haddii ay jiraan khataro, maqaar caddeynta ayaa caan ka ah sidii hore
Is caddeynta ama caddeynta waa mowduuc aad u muran badan. Waxay bixisaa macne soo jiidasho leh si loo hagaajiyo midabkaaga. Waxaa jira siyaabo badan oo maqaarka looga fududeeyo. Kuwaas waxaa ka mid ah kareemada maqaarka gaarka ah iyo daaweynta laser. Sababtoo ah qiimaheeda oo hooseeya iyo nabadgelyadiisa sare, dad badan ayaa doorta kiriimyada maqaarka. Hadaad tahay c ...
Ugu horreyntii, waa maxay boric acid? Boric acid waa nooc ka mid ah alaabta ceyriinka ee warshadaha, taas oo ah budo cad. jajabiyey sidoo kale waa la bixin karaa, Waa shey muhiim ah oo ceeriin ah oo warshad ah oo lagu sameeyo galaas, dhoobada iyo sunta cayayaanka. Nolosheena maalinlaha ah, suurtagalnimada in lala xiriiro waa mid aad u yar, waxaan badanaa ...
Hordhac kooban oo ku saabsan Chlorine dioxide
Sanadihii la soo dhaafay, infekshanno badan oo xagga neef-mareenka ah ayaa ka dhacay adduunka oo dhan, jeermis-dilayaasha ayaa door weyn ka ciyaaray xakameynta cudurka. Dawada jeermiska ee loo yaqaan 'Chlorine dioxide disinfectant' ayaa ah tan kaliya ee wax ku ool ah ee jeermiska disha jeermiska dilaaga ee ay aduunku aqoonsan yahay. Koloriin ...
NMN ma nabad baa? Ma loo isticmaali karaa muddo-dheer?
NMN waa walax aad u caan ah oo ka hortagga gabowga sannadihii la soo dhaafay, laakiin waxay ka yar tahay shan sano tan iyo markii ay run ahaantii gashay indhaha dadweynaha. Dad badan ayaa ka walwalsan in aysan ammaan ahayn in la qaato NMN muddo dheer, dadka qaarna waxay u maleynayaan in saameynta sheegashada ee NMN ay kaliya sii joogi doonto heerka tijaabada xoolaha ...